जब ईरानले मिसाइल हान्यो, भारत ल्याइँदै गरेको राफेल विमानका पाइलटहरु लुक्न थाले ! - बडिमालिका खबर
जब ईरानले मिसाइल हान्यो, भारत ल्याइँदै गरेको राफेल विमानका पाइलटहरु लुक्न थाले !
एजेन्सी । अमेरिकासँगको बढ्दो तनावका बीच ईरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित फ्रान्सको अल धफ्रा एयरबेस नजिकैको समुद्रमा थुप्रै मिसाइल हानेको छ । त्यहीबेला फ्रान्स हुँदै भारत ल्याउन लागिएका ५ वटा राफेल विमान पनि त्यही पार्किङ गरिएको थियो । ती विमानमा भारतीय पाइलटहरु पनि थिए । जब इरानले लगातार मिसाइलहरु हान्न थाल्यो । राफेलका पाइलटहरु सुरक्षित ठाउँमा लुकेका थिए ।
इरानले आफ्ना मिसाइलहरु परीक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ । मिसाइल प्रहारपछि फ्रान्सेली एयरबेस र खाडीमा रहेका अमेरिकी सैनिक अड्डाहरुमा पनि अलर्ट जारी गरिएको थियो । अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्डले इरानले मंगलबार बिहान हारमुज स्ट्रेट नजिकै धेरै ब्यालेष्टिक मिसाइलहरु हानेको पुष्टि गरेको छ ।
इरानी सैन्य अभ्यासको सन्देृश संयुक्त राज्य अमेरिका लक्षित हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । इरानको पछिल्लो सैन्य अभ्यास र अमेरिकी प्रतिक्रियाले दुई देशहरुबीच युद्धको सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । पछिल्ला ६ महिनायता त्यहाँ दुई देशबीच बढ्दो तनावका दर्जनौ घटना भएका छन् । -दैनिक जागरण
भारी वर्षाका कारण भारतमा घर भत्किँदा ९ जनाको मृत्यु,
भारतको कानपुरमा सवारी दुर्घटना, कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु
बारुदी सुरुङ बिस्फोटमा परेर ११ जनाको मृत्यु
बुरकिना फासोको एक गाउँमा आतंककारी हमला, १३२ जनाको ज्यान गयो